Soy de Mac သည် AB Internet group ၏ကြားခံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၎င်း၏စာဖတ်သူများအားလုံးအတွက်သတင်း၊ သင်ခန်းစာများ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းပညာနှင့်အထူးသဖြင့် Mac နှင့်ပတ်သက်သည့်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှပေးခဲ့သည်။
Soy de Mac တွင်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့် Apple နှင့် Mac တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေသည့်သို့မဟုတ်လိုအပ်နေသူများအားအမှန်တကယ်စိတ်အားထက်သန်သောအရာများအကြောင်းအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှမျှဝေရန်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သည်။ သုံးစွဲသူအသိုင်းအဝိုင်းသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးတက်များပြားလာသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac နှင့် Apple တို့အပေါ်သြဇာအရှိဆုံးသောမီဒီယာတွင်ပါဝင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
El Soy de Mac ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ၎င်းကိုအောက်ပါစာရေးဆရာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သငျသညျ Soy de Mac ၏အရေးအသားအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်, ဒီပုံစံကိုဖြည့်ပါ.
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ Soy de Mac မှညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များအားလုံးနှင့် Apple ထုတ်ကုန်များကိုနှစ်သက်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးဘဝကိုစတင်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာများကိုတစ်ခါမှမခံစားဖူးပါ။ ငါငယ်ငယ်တုန်းက Amstrads နဲ့ Comodore Amiga ကိုတောင်ကစားရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သုံးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကွန်ပျူတာနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်၏သွေးထဲတွင်ရှိနေသည်။ ဤနှစ်များအတွင်းဤကွန်ပျူတာများမှရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဉာဏ်ပညာကိုမျှဝေနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူရန်လည်းဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုတွစ်တာပေါ်တွင် @jordi_sdmac အဖြစ်တွေ့လိမ့်မည်
၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်လောက်ကမှ စ၍ ကျွန်ုပ်မှာ MacBook အဖြူနှင့်အတူ Mac ဂေဟစနစ်ထဲသို့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် Mac Mini ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ operating system တွင်ဆယ်နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ကြားမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအသိပညာကိုမျှဝေလိုပါသည်။
Manuel Alonso ၊
ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းပညာပန်ကာနှင့်အထူးသဖြင့် Apple စကြာ ၀ .ာ။ MacBook Pros ကတော့ Apple မှာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေလို့ထင်တယ်။ MacOS ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသုံးလို့ရရင်အသစ်အဆန်းတွေကိုရူးသွပ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ Touch Bar သည်ကွန်ပျူတာအားလုံးတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Apple Watch ကငါ့အသက်ကိုကယ်တင်ပြီးကတည်းက Jobs and Woz ဖန်တီးတဲ့စကြဝcreatedာကိုချိတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်အလုပ်များကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက် iMac ကိုနှစ်သက်သည်။ MacOS ကသင့်အတွက်လွယ်ကူစေသည်။
အလုပ်အကိုင်အားဖြင့်ဆေးပညာနှင့်ကလေးအထူးကု၏ဘွဲ့။ နည်းပညာ၊ အထူးသဖြင့် Apple ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ထက်သန်မှုရှိသော၊ "iPhone News" နှင့် "ငါက Mac မှအယ်ဒီတာ" ဖြစ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ မူရင်းဗားရှင်းအတွက်စီးရီးပေါ်ချိတ်။ Actualidad iPhone နှင့် miPodcast နှင့် Podcaster ။
အထူးသဖြင့် Apple ထုတ်ကုန်များ။ ငါ Macbook နဲ့အတူလေ့လာနေတာ၊ လက်ရှိ Mac ကငါ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့အားလပ်ချိန်တွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အတူတွဲဖက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ operating system တစ်ခုပါ။
နည်းပညာ, အားကစားနှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်။ အရူး။ များစွာသော Apple ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ထိုအခါငါဘယ်နေရာမှာမဆိုငါ့အ mac ယူပါ။ ငါဟာအရာရာတိုင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါဟာငါဒီလောက်လည်ပတ်နေတဲ့ operating system ကိုပျော်မွေ့စေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကမိုက်ခရိုကွန်ပျူတာကွန်ပြူတာပညာရှင်ဟာ Mac နဲ့ပတ်သက်ပြီး Apple နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအထူးသဖြင့်နည်းပညာနှင့်အထူးသဖြင့်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်နှင့်ပျော်စရာအချိန်များကိုကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်ကိုနှစ်သက်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Apple ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားသူများ၊ Mac ဟာကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုသင့်အတွက်ယူဆောင်လာဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
ယရှေု Arjona Montalvo
iOS နှင့် IT စနစ်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သူသည်လက်ရှိတွင် Apple operating system အကြောင်းနေ့စဉ်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ငါ Mac နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာပြီးမင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေပေးမှာပါ။
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာက Apple ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားထက်သန်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာကိုလောင်းကစားသူများ၏ Mac သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနှင့်အချိန်တိုင်းသင်ယူခြင်းဘယ်တော့မှစွဲ။ ဒါကြောင့်ငါရေးလိုက်သမျှအားလုံးဟာမင်းအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းသင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်သော၊ နည်းပညာအသစ်များနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးနှင့်ပညာရေးကဏ္ sector၊ ငါဟာအမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူနေတဲ့၊ Mac နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အသည်းအသန်ရှိနေပြီး၊ အခြားလူများကဒီကြီးစွာသောလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုခံစားနိုင်အောင်အမြဲဆက်သွယ်ကြသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်နည်းပညာနှင့်အထူးသဖြင့် Mac လောကအကြောင်း ၀ ါသနာပါ။ ကျွန်ုပ်အားလပ်ချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအချို့သောပရောဂျက်များနှင့် web ၀ န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအပ်နှံခဲ့သည်။ iPad ကျွမ်းကျင်သူ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စာရင်းဇယား o IP လိပ်စာငါနေ့စဉ်သင်ယူနေတဲ့ငါ့ Mac နဲ့အမြဲနေပါ။ မင်းဒီအချက်လေးတွေနဲ့ဒီလည်ပတ်မှုစနစ်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုမင်းသိချင်ရင်ငါ့ဆောင်းပါးတွေကိုမင်းကြိုက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အရေးအသားနှင့်နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဆန္ဒနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကစပြီးသူတို့ကို Macbook သုံးပြီးကဏ္ sector အထူးပြုမီဒီယာတွေမှာပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ကံကောင်းခဲ့တယ်။ အားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးလား။ ငါဒီ operating system အတွက်သူတို့လွှတ်ပေးရန်မဆိုပရိုဂရမ်အကြောင်းပြောနေတာပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကကဲ့သို့ပျော်မွေ့ဆက်လက်။
ဟိုင်း! ပထမဆုံး Mac ဖြစ်တဲ့ MacBook Pro အဟောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှတ်မိနေတုန်းပဲ၊ အဲ့ဒီတုန်းကငါ့ရဲ့ PC ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ထောင်ပေးခဲ့တယ်။ ထို နေ့မှစ၍ ပြန်၍ မသွားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် PC အကြောင်းများကြောင့်အလုပ်အကြောင်းပြချက်များဖြင့်ဆက်လက်ရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ Mac ကို“ disconnect” နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစီမံကိန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။